Amaholide Ahamba Ngezikebhe - Iyiphi indawo ethandwa kakhulu? | Ukuhamba kwe-Absolut
USusana godoy | | Greece
Uma ufuna ukubeka eceleni indiza kanye nemoto noma isitimela, akukho okufana nokubheja kwenye yezindlela ezikhetheke kakhulu zokuhamba. Amaholide okuhamba ngesikebhe ngaso sonke isikhathi aneminye yale mibono okufanele uyifeze okungenani kanye empilweni yakho. Kungaba uhambo lwezothando uma uthanda noma umndeni, kuya ngezidingo zalowo nalowo, kepha kuzona zozimbili lezi zinto okulindelwe amaphupho ethu kuzofezeka. Ubungeke uthande ukugcwalisa?
Yingakho ngemuva kwalesi sikhathi sonke sobhadane, kufanele sigubhe ukubuya kohambo ngesitayela. Ngokuhlakanipha yebo, kepha ukufeza lawo maphupho esiwakhulume futhi afihliwe isikhathi eside. Sikutshela konke izinzuzo zohambo olunjalo nezindawo eziyizintandokazi ongazivakashela.
1 IGrisi: Enye yezindawo ezihamba phambili zokuhamba ngesikebhe
2 Kungani kufanele uhambe ngomkhumbi?
3 Amaholide ohambo olwandle, ungabhukha nini?
4 Yini engidinga ukuyenza ngesikebhe saseMedithera
IGrisi: Enye yezindawo ezihamba phambili zokuhamba ngesikebhe
Yize kuliqiniso ukuthi singakhuluma ngezindawo eziningana ngohlobo lwamaholide okuhamba ngomkhumbi, iziqhingi zaseGreek zingenye yezintandokazi ezinkulu. Akunandaba ukuthi ubusuvele uye kuleyo ndawo, ngoba ngenxa yalezi zindlela zokuhamba, uzoyithola ngendlela ekhetheke kakhulu. IMedithera ihlala iyigugu lokuyithola futhi ngenxa yalokho, iGreece iyitshe layo elikhanya kakhulu.. I cruise greece Ingenye yezindawo ezikhethwe kakhulu ngoba le ndawo inengcebo eyingqayizivele yemivubukulo, ngaleyo ndlela isishiya namathafa azokhonjiswa ku-retina yethu.
Kepha hhayi yena kuphela kepha ukuma e-Athene nase-Acropolis yayo kuzoba ngenye yamaphuzu abalulekile, ngaphandle kokukhohlwa iCrete, ngoba inamachweba amabili wemikhumbi ye-cruise. Lapho ungavakashela isigodlo saseKnossos, esizokumangaza futhi ngezinsalela zaso nephuzu eliyinhloko lempucuko yamaHellenic. Uzwile ngeMykonos ngamabhishi ayo. Ngakho-ke, kungenye yezindawo ezikhethiwe lapho umisa ohambweni lwakho. Ukuphela eSantorini ngokushona kwelanga kwayo okudumile. Manje uzoqonda kancane ukuthi kungani iGrisi neMedithera ingenye yezindawo eziyinhloko!
Kungani kufanele uhambe ngomkhumbi?
Yize kungabonakala njengombuzo esaziyo ukuthi siwuphendule kanjani, sizokunikeza izizathu ezimbalwa zokubekisa kwakho. Kuyacaca ukuthi i-cruise Kuzosiyisa ezindaweni okungelula ukufinyelela kuzo njalo ngezinye izindlela zokuhamba. Kungakho ukuba yinto ongayenzi njalo, ungayiphila ngokujulile. Ukuqala kulokho kuyinto entsha ngokuphelele futhi creative, uzoba nenketho yokwenza imisebenzi ehlukile kepha ngaphandle kokushiya indawo efanayo. Ngoba esikebheni uzothola imisebenzi yasemini, ngemidlalo, ukuzijabulisa, isikhathi sokuphumula sokuphumula nokunye okuningi. Konke kwenzelwe ukuthi ukujabulele ukuhlala kwakho!
Amaholide ohambo olwandle, ungabhukha nini?
Okuhle kakhulu ukuthi, njenganoma iluphi uhambo olubiza usawoti walo, kungcono ukwenza ukubhuka ngokushesha okukhulu. Intuthuko yiyo yonke into ukuze ukwazi ukuhlela kangcono kakhulu. Uma ufuna ukonga okuncane, akukho okungcono kunokungakwenzi ngenkathi ephezulu futhi ulinde kuze kube nguSepthemba ukuyithola. Njengoba ngaphezu kwalokho, amazinga okushisa wamanye amaphuzu ozowavakashela azoba sebangeni elingabizi kakhulu ukuze ukwazi ukujabulela uhambo ngalunye oluya ngokugcwele. Yize kuliqiniso ukuthi unyaka wonke ungenza ukubhuka kwakho ngokuya ngezidingo zakho. Njengoba uma nihamba njengomndeni, nizodinga isikhala esithe xaxa futhi kungcono ukuqhubekela phambili ngaphambi kokuphelelwa izihlalo. Khumbula ukuthi kuzohlala kunokunikezwa ongakusebenzisa ukusindisa ingcosana enhle.
Yini engidinga ukuyenza ngesikebhe saseMedithera
Uma usukhethe futhi wabhukha uhambo lwakho kanye nalo izinsuku ozozichitha eholidini lakho lokuhamba ngomkhumbi, kuvela ukungabaza, ngoba awukaze uhambe ngale ndlela yokuhamba. Kepha ungakhathazeki ngoba akukho okuhlukile kwabanye obaziyo. Okubalulekile ukuthi uphumule futhi uzijabulise ngokugcwele ngoba isikebhe sinakho konke okudingayo. Yize kuliqiniso ukuthi okudala ongakwenza ukuthatha izingubo zombili ukuze unethezeke emini nokuhleleka okuthe xaxa ebusuku. Lokhu kuhloswe ukuthi kube semkhunjini.
Kepha uma senza izitobhi esifuna ukuzijabulela, kungakuhle ukuthi ukhiphe isitayela sakho esintofontofo futhi esingajwayelekile. Ngakho-ke, kufanele ngaso sonke isikhathi sigqoke izicathulo ezifanele nokuthi izingubo nazo zifanelekile. Kulolu hlobo lohambo, khumbula ukuphatha njalo ubhaka omncane onezinto eziyisisekelo, kanye nebhodlela lamanzi nokuvikelwa yilanga. Khumbula ukuthi kwezinye izindawo ozozivakashela, abavumeli ukungena nezingubo ezimfushane kakhulu futhi kuyinto okufanele uyinake. Impela manje uzocaca ngokuya kwakho, izindlela zakho zokuhamba kanye namaholide akho amahle akulindele!
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Iholide Lesikebhe: Yenza Wonke Amaphupho Akho Agcwaliseke!